Iyo Apple Watch Sport inogona kuve nedambudziko rekugadzira | IPhone nhau
Isu tese tinorangarira dambudziko rakarova iyo iPhone 5 nhema, umo aluminium yaiwanzo nyore ku "pecks" uye kukwenya uko yakaratidza ruvara rwesimbi iyo yakanyanya kumira kubva kune imwe kifaa. Icho chiri chikonzero ichi kuti kubva ku iPhone 5s tinoona iPhones mu Space Grey ruvara pane kuve yakasviba zvachose.
Zvino dambudziko rakafanana rinogona kunge richitambura zvakare mu Apple Watch Sport yemuvara mumwe chete, sezvo paine zviitiko zviri zviviri mu Reddit sezvakaita yepamutemo Apple rutsigiro umo vashandisi vakasiyana vanofumura dambudziko iri rinokanganisa zvinyorwa paseri kwewachi.
Ichokwadi ndechekuti hazvishamise sezvazvinogona kuratidzika, nekuti zvinoenderana nemamiriro ezvinhu anoitwa wachi zuva nezuva - senge mamiriro ekunze kana ziya kana tichiita mutambo wakawanda, semuenzaniso-,Izvi zvinogona kukonzera kumwe kukuvara kune iyo aluminium. Nekudaro, hazvisi izvo zvatinotarisira kubva kuchigadzirwa chakadai, chakagadzirwa muchikamu chikuru kuti "titambure" mamiriro akasiyana anogona kumuka kana tichiita zvemitambo uye panguva dzezviitiko zvedu zvezuva nezuva.
Kana iwe uri mumwe weavo vakawirwa nedambudziko iri, tinoziva kuti Apple iri kutsiva zvikamu zvakakanganisika, saka haufanire kunonoka kutaura nekambani technical technical online kana nekuenda kune yako Apple Store iri padyo. Saizvozvowo, tinoda kuziva kana paine chero nyaya pakati pevaverengi vedu, saka kana yako Apple Watch ichiratidza zviratidzo zvinoonekwa mumifananidzo iwe unogona kusiya chirevo pazasi peichi chinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambudziko neApple Watch Sport Space Grey, isinganyanye kusagadzikana pane mamwe?
Mario Jimenez R akadaro
Mhoroi, ndinobva kuMexico, uye kana apuro iri kudzimwa, fonera technical service, ini ndine yangu nhamba nhamba uye ndichaona zvinoitika.
Pindura kuna Mario Jimenez R
Hector Valdivia akadaro
Mhoroi, izvo zviri kuitika kwandiri futi, asi haisi nzvimbo pfumbu, iri sirivheri, ini ndirikutoita musangano nechitoro chemaapuro. Ini ndinobva kubarcelona. Ndichakuudza nezvazvo.
Pindura Héctor Valdivia
Zvakaitika kwandiri. NeChitatu ndine musangano, regai tione zvavanondiudza ... Kunyangwe mune technical technical, kuburikidza ne chat, ivo vakandiudza kuti vachachinjira imwe. Uye ini handitambi naye, ndinongoenda kunomhanya. Ini zvakare ndakapfeka silicone back protector, inova isingawanzo ...
Zvinoshamisa sei !! Ini ndanga ndichinyanya kukwenya nekuti ini ndine aruminiyamu nzvimbo pfumbu uye chinhu chimwe chete chakaitika kwazviri seicho chiri pamufananidzo uri pamusoro, ini ndonhonga mudura chaimo uye ndinoichengeta zvakanyanya, ndaisaziva kuti chii chingave chakaitika ,
Mangwana ndine musangano panguva yemarbella apple chitoro cheimwe nhaurwa, ini ndichatora mukana ndozokuudza izvi ndozokuudza
CESAR R SANOJA @ (@CESARSANOJA) akadaro
Ini ndangotarisa yangu, yakafanana neeruvara rwataurwa uye yakamenywa, zvinoita sekunge mifananidzo iri muchinyorwa chino yakatorwa kubva kuwachi yangu. Ndiri kudaidza rutsigiro rwehunyanzvi kuti ndione zvinoshanda.
Pindura kuna CESAR R SANOJA  (@CESARSANOJA)
Conrado Serrano akadaro
Ini ndaigona kutaura zvakafanana naCesar, musi wa26 ndine musangano
Pindura Conrado Serrano
Daniel Blanco Manzano akadaro
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri sekumufananidzo, ndine apuro resirivha. Ini ndichafonera technical technical online, sezvo ini ndisina Apple Chitoro padyo.
Pindura kuna Daniel Blanco Manzano
@AkaParadze (@AkaParidze) akadaro
Jjj hesi asi watochenesa Apple wachi. Ndine kubva pazuva rekutanga parakatanga kutengeswa kubva pandakaitenga kuFrance ndinoenda kunomhanya kwemazuva matatu ingangoita maminetsi makumi mashanu pamwe neawa rezviyereso uye pazuva rechina ndinobuda pabhasikoro regomo pakati pe3: 50. kusvika kumaawa matatu ndinozorora pazuva uye ndinotangira pandinosvika ndinoibvisa pandinogeza nemumagels asi ndinoiisa pasi pepombi ndokuisuka kubva mudikita uye haina rukudzo.
PS: gogodza huni
Pindura kuna @APPninolin (@APPninolin)
Zvakanaka, izvo zvichave izvo, kuti avo vanodonha pendi imo nekuti ivo vane tsvina iyo isingambopukuta ziya rewachi.
Jose Luis Jimenez Almodovar akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chakaitika kwandiri, uye ivo vakachinja kuti chive chitsva zvachose, zvakaitika kune vanhu vazhinji, iwe unogona kuona mafoto mune ino foramu,
Pindura kuna José Luis Jimenez Almodovar
Nenzira, kune mose imi mune musangano kuchitoro cheapuro, kumbira kuti vakupe imwe nyowani, iwe uchaona kuti vachakurumidza sei kugadzira chirongwa chitsva chekuchinja wachi.
Mhoroi, ndiri shasha yeApple uye chokwadi ndechekuti isu tinogara tichitarisira mhedzisiro kubva kune ichi chiratidzo. Ndakashamisika kuona yangu Apple wachi isina iyo logo uye chokwadi ndechekuti inoratidzika kunge yakashata kwazvo, ini ndagara ndichizvipfekedza nesilicone kesi. Kubva zuva randakaitenga, ndakaishandisa zvishoma kuita mitambo, ndichidzivirira kuinyorova, ndinomesa zvakanaka mushure mega chega cheziya chiitiko chinokonzeresa kurovedza muviri, zvinoshamisa kuti izvi zvinoitika munguva diki diki yekuti ndanga ndiine Apple tarisa uye asi kana ichi chigadzirwa chave nemhando dzakasiyana dzebvunzo dzine chekuita nemitambo chiitiko, ngatitarisirei kuti Apple ichapa mhinduro, ndaita musangano uye tichaona zvinoitika.
Pasina nguva ataura pane kuita. Ini ndataura neinternet service uye vandiudza kuti zvinoitika hazvisi zvakajairika (zvine musoro) uye kuti vari kuzonditumira imwe nyowani kutsiva yazvino. Chandinetsa ndechekuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika kune iyi nyowani ... saka chii?
Sekukuudza kwandakaita nezuro ndanga ndiri muchitoro chemaapuro muMarbella kune rimwe dambudziko randaive naro uye ivo havana kana chavaiziva nezve dambudziko reawa, vakandiudza kuti ndaifanirwa kuita musangano nhare saka mangwanani ano ndafonera apple care uye pandakatsanangura dambudziko vaive vasina ruzivo rwekuti Chii chingave chakaitika kune vamwe vatengi, ndakavapa chinongedzo pane ino peji kuti vagone kuona zvinoitika kune vamwe vashandisi uye mushure mekukwiridzira kufona kwangu kune manejimendi akasiyana siyana (45 min kufona ) vakandiudza kuti nditumire pikicha yetemu yacho neemail pamwe nechip uye kuti nemusi weMuvhuro vaizondisheedza vondipa mhinduro, mhinduro iyo kwandiri chete inosanganisira kutsiva iyo terminal neimwe nekuti zviri pachena kuti ndizvo kukanganisa kwekugadzira sezvo zvisingaite kuti vanhu vazhinji vaitike kwatiri zvakangofanana, ini ndichakuudza zvavanondiudza neMuvhuro
Haisi kukuvara kwemuviri kunokonzerwa newe, zviri pachena irema rekugadzira uye nekudaro isu tinofanirwa kukuzivisa iwe uye isu tese tinokanganiswa tinofanirwa kukumbira shanduko yetaraini
Vakanyorera kwandiri nhasi uye vandiudza kuti vatumira email yangu nemufananidzo wechiteshi changu pamwe nevevamwe vashandisi veforamu kudhipatimendi reinjiniya kuti kana vaona chimwe chinhu vazondisheedza zvakare
Iwe unogona here kundiudza nhanho dzekutevera kutora iwacth shanduko sezvawakaita? ¿?
Pindura kune sebas
Ini ndakapinda muchikamu chekutsigira kuburikidza newebhu, vanokubvunza kuti ndeipi mudziyo waunoda rutsigiro, iwe tinya paawa mukukuvara kwemuviri, unosiya foni yako uye vanokufonera,
Chinhu chekupedzisira chandinoziva nezvenyaya yangu ndechekuti nhasi DHL iri kuuya kumba kwangu kuzotora wachi yangu kuIreland nekuti vari kuda kuiongorora uye kunyangwe vasina kundivimbisa vakandiudza kuti vangangopa mutemo wekutumira kwandiri imwe nyowani ... ini ndichakuudza nezvazvo.
Zvakaitika kwandiri futi, ndichaenda kunotaura nerutsigiro kuti ndione zvavanondiudza.
Ini ndataurawo nehunyanzvi sevhisi. Muchiitiko changu ndine mawachi maviri emaapuro (imwe kubva kuna baba vangu uye imwe kubva kune yangu), imwe chena uye imwe iri grey nzvimbo, uye apuro raenda mune ese ari maviri. Mune sirivheri, kunyangwe mamwe mavara arikubvaruka, nepo munzvimbo yegrey ari kuoneka kuburikidza nemavara semavara andinotya kuti anozopedzisira abva.
Kana ndichitaura nehunyanzvi sevhisi, uye kubvira kuenda kuchitoro chemaapuro uye kubhuka musangano kuti utarise kunotora nguva yakawanda, vakandiudza kuti zvaizoitika kwandiri nemukuru uyo ​​akandikumbira kutumira mapikicha uye kuti vawedzera iyo kubazi reinjiniya uye izvo vatondiudza. Pakutanga, munhu wekutanga kubva kuhunyanzvi sevhisi akandiudza kuti sezvo iri dambudziko rakaoma kugadzirisa, vangangonditumira imwe nyowani.
Munhu wekuchengeta apple akanditaurira kuti zvaishamisa kuti zvakaitika pamawachi maviri panguva imwechete ...
Ngatione zvavanondiudza uye kana tiine rombo rakanaka
Sezvo zvichange zvichishamisa kuti zvinoitika kwauri mu2 panguva imwechete kana chiri chirema chekugadzira, pane akawanda mafoto mumaforamu evanhu vakave nechinhu chimwe chete uye chevanhu vakaverenga nhau nekuti sezvo zvakaitika kwandiri Kusvikira ndaverenga nhau ndakafunga kuti ndingadai ndakazviita netsaona! Vanhu ava vane dambudziko rakakomba uye izvo hazvisati zvaita nzira yavo kune vekunze midhiya ...
AL, urikuteedzera nhanho dzakafanana idzo ini ndatevera; Ivo vachakuudza kuti utumire mafoto ekuti ndikuudze gare gare kuti ubate DHL kuti uitumire kuIreland kunoongororwa, kunyangwe zvichindipa kuti vari kubviswa mukutenderera nekuchimbidza ...
DHL yakauya kumba kwangu nezuro kuzoenda nayo kwavari, ndinofungidzira vachandifonera neMuvhuro uye ndinovimba ndiko kuzondiudza kuti vachatumira imwe nyowani ...
Uli, ini ndakatevera nyaya yako (kunyangwe pachinzvimbo chekuiendesa kuglen ndakadana appleCare zvakananga) uye ndakataurawo pamusoro pekupa zviitiko mumaforamu uye mamwe mafoto Akandiudza izvo kwete nekuti maforamu akawandisa uye "anonakidza", asi chokwadi ndechekuti kune vanhu vazhinji uye vazhinji. Ndinovimba une rombo rakanaka, asi tiri kuenda nedambudziko rakadai, zvirokwazvo ivo vachakutumira imwe nyowani nekuti harisi dambudziko riri nyore kugadzirisa ... Mune mamwe maforamu ndaona kuti vakachinja wachi vasina matambudziko.
Ndinovimba idambudziko pazvikamu zvishoma sezvo ini ndisingade kuti zviitike zvakare. Ndakaudza mumwe wevashandi kuti kana dambudziko rikaramba riripo, panogona kunge paine mukana wekuchinja (kubhadhara mutsauko) kuenda kune yepamusoro mhando uye akandiudza kuti hapana zvakadaro sarudzo, saka ngatitarisirei kuti iri dambudziko rakazvimiririra mune mashoma zvikamu ...
Iwe uchatitaurira zvauri kuita!
Pindura kuna Al
Zvakanaka, ini ndinotaura nezvenyaya yangu muappel. Ndakatora wachi yangu, ivo vakaiona uye vakaichinjira imwe, ndinovimba zvakafanana hazvizoitika zvakare nesiriki yesikirini yewachi iyi. Vamwe vakazvipa mhinduro. Taura nezvazvo, kwaziso
Iye munhu arikubata nyaya yangu akangondisheedza achindiudza kuti department reinjiniya rakaongorora wachi yangu rairaira kuti ndigotumirwa wachi itsva, iyo yatove munzira uye iyo yandichagamuchira mumazuva mashoma.
Ndakagutsikana kunyangwe ndisina kufunga kumwe kuguma kwanga kusiri uku,
Kune vese imi munokanganiswa neichi chigadzirwa chekuremara, moyo murefu nemaitiro, munotoziva kuti vachachinja.
Sebas, hama yangu akaenda kuchitoro cheMarbella nedambudziko iro uye ivo vanoziva nezve iro dambudziko. Zvinotaridza kwandiri kuti vane yakawanda nyaya.
Munun'una wangu akaenda nayo kuchitoro cheMarbella mwedzi wapfuura uye ivo vakaichinja mushure mekutyisidzira nefomu rekudai. Zvakanaka, nhasi chinhu chimwe chete ichi chinoitika zvakare. Iri kubvisa uye haatomboipfeka. Yangu yandinopfeka mazuva ese apuro radzimwa. Ndataura naApple uye vanondiudza kuti vari kuzochinja uye kuti vanonzwisisa kuti chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri. Apple ichafanirwa kuisa mhinduro nekukurumidza kunyaya, zvikasadaro isu tine mvumo yekudzosera mari yedu sezvo iri mhosva yavasinga gadzirise kana kusiri kuigadzirisa.
Ndicho chinhu chinondinetsa. Zvinoratidzika kunge zviri, kana saka ivo vanoda kuti titende, kuti kwavari chinhu chitsva uye chinoshamisa kuti pendi inodonha kubva pamutambo wemaapuro uye ivo vanopenga vachiti inotumirwa kune technical service. Kana vakasawana "mushonga" wemuenzaniso uyu, kwandiri mhinduro yacho ndeyekuti nekubhadharwa kwemusiyano vaizopa yemhando yepamusoro (panowanikwa mavara acho) asi zvinoita sekunge izvi hazvigoneke Ndichiri kungotenderera nemumiriri ari kubata nyaya yangu. Pandinongotaura navo zvakare, ndichavabvunza zvakare, asi vanofanira kudzorera wachi itsva iyo, tinoziva kuti ichaitika, pendi inodonha zvakare… hazvigamuchirwe.
Parizvino, ichafanirwa kushandurwa kakawanda sekudikanwa ...
Fran kubva akadaro
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri uye ndinofunga ndinoziva nei. Dambudziko rinouya kana iwe ukaisa mudziviriri paApple Watch kuti uichengetedze nekuti zviripachena iwe unoda kuchengetedza wachi yako kubva mukuvhunduka, saka kana iwe uchiita zvemitambo uye ziya rinopinda mukati memudziviriri zvinoda mari yakawanda kuti iome uye mwando unoramba uri pasi. Iyo kit iri mumubvunzo ndeyekuti kana iwe ukaiisa kuti iite recharge iyo wachi, inotonhora kupisa uye iro ziya rinogadzira iro iro pendi uye anodizing pane aruminiyamu zvinonyangarika, zvinokuvara, nehuremu hunotevera hwewachi. Wachi yangu iri mune yehunyanzvi sevhisi uye ini ndakamirira mhinduro, zvinoenderana nechitoro chemachina muBarcelona chokwadi vanondipa imwe nyowani yakagadziriswa, izvo zvandisina chokwadi nazvo, tichaona, kuvonga nekukwazisa kune vese.
Pindura Fran del
Mhoro Fran, rega ndikuudze. Ndine wachi isina mudziviriri uye zvakaitika kwandiri. Munin'ina wangu anawo asina muchengeti uye haana kana kuatora uye pane izvo zvishoma zvaakashandisa pasina zvemitambo akabvarura. Chandisinganzwisise ndechekuti mashandisi haana kuchinjisa sei zvakananga. Apple yakaraira zvitoro kuti zviite saizvozvo. Muchokwadi, kana iwe ukasheedza Apple's technical service ivo vanokuudza iwe kuti uite musangano kuti iwe ugone kuenda uye uchizochinjwa. Zvisinei, ndinopokana kuti chinhu chimwe chete ichi hachiitike kune chitsva nekuti hama yangu pavakamushandura mushure memwedzi, zvakafanana zvakaitika kwaari.
Ndatenda Ignacio. Kune yako tsananguro. Chokwadi ndechekuti ini ndaitenda kuti dambudziko raive rakapfeka dziviriro uye ziya mukati. Chinhu chacho chinofanirwa kunge chiri nekuda kwekukanganisa nependi uye anodizing yealuminium kana uchinge wagamuchira kupisa kubva kubhatiri kubhadharisa.
Panyaya yeApple semuchina, uye izvozvi zvaunotaura pavanongondisheedza uye vachiuya kuzotora, vachandinzwa, nekuti ndakamanikidza kuti vangandisiya sei ndisina wachi kwemazuva gumi nemashanu uye ndakaudza ivo kuti kana ndiyo yaive nzira yese paApple, vakati hongu. Ini ndichave nemazuva gumi nemashanu ndisina wachi nekuda kwekuremara kwewarandi, kana imwe ichishandiswa kuongorora zviitiko zvese zvezuva nezuva nezvimwe neApple wachi.
Kugona. Izvi zvakafanana zvakaitikawo kwandiri. Apuro ranyangarika. Ini handishandisi mudziviriri futi uye handiite zero mitambo. Ehezve, ikozvino nekupisa nekuti inodikitira, asi ini ndinochengeta wachi yacho yakaoma pasi pese pandinenge ndaibvisa kubhadharisa. Ndine musangano musi weSvondo (tiri kuenda nhasi) na18.30 pm kuxanadu AppleStore. Ndinovimba vanochichinja panguva ino nekuti hazvizogara zvakanaka neni kana vakandiudza kuti ndasara ndisina wachi kwemazuva gumi nemashanu. Zviripachena kuti ihurema hwekugadzira. Uye ini ndichamuudza kuti kana zvikaitika kwandiri zvakare (nekuti zvichazoitika zvakare), kuti ini ndiri kuzopa mukaka kuti uchinje zvakare. Chinhu chakashata kana garandi yegore rimwe yapera, sezvo vasingazvigadzirise zvisati zvaitika nezvikwata zvitsva uye kukanganisa kwakagadziriswa, ngatione zvichaitika ...
Mhoroi, zvimwe chete zvakaitika kwandiri zvakare, mune yealuminium apple wachi yemutambo. Kumushure, ndarasa chidimbu chealuminium, iko iko logo. Asi pane chairo rinodzika! uye kukona rezasi reruboshwe kumberi, zvakafanana zvakaitika kwandiriwo. Chitatu chinotevera ndichaona zvavanondiudza… Ndinoita zvemitambo nekudikitira, asi zvinoita sekunge chikonzero chakakosha chealuminium kupunzika! Ini ndanyadziswa, asi zvirinani vanopindura ... Ndiri kubatanidza mapikicha, ayo andinovimba iwe unogona kuona.
Pindura kune oscardm1
Jesu Julian akadaro
Mumwezve kune izvo zvakafanana zvaitika. Fonera Apple uye vari kuongorora nyaya yangu nemamwe mafoto andinovatumira. Ndakamirira mhinduro. Chinhu chega chakandisiya panguva yekupenda ndipo pane Apple apple. Izvo zvinoda kuziva uye zviri pachena kuti pane zvakakwana zviitiko zvekuziva kuti uku hakusi kushandisa zvisizvo. Iko kunzwa kwekuti kukundikana uku kunopa kunodemba pamutengo watinobhadhara wechigadzirwa. Ngatione zvavanoita, asi ini ndinoenda kupfuura mumwe wevaanoshanda navo vachiti ivo vanofanirwa kutipa iyo yepamusoro modhi vasina kubhadhara mutsauko kana kudzosera mari yacho zvakananga.
Pindura kuna Jesu Julian
Kugona. Sezvandambotaura pamusoro apa, ndakatora Apple Watch kuApple musi waGunyana 20 uye vakaichengeta (isina mabhande) uye mushure memasvondo maviri vakandidaidza kuti ndiende kune imwe chinzvimbo chavakaitora, vakaiongorora ndokuti vandipe imwe. Kana ndichirangarira nemazvo vakandipa musi waGunyana 2. Zvakanaka, mazuva mashoma apfuura, muna Ndira 30, 15, zvakaitika kwandiri zvakare. Apple rawa uye nanhasi handitambe zvemitambo, ndisina kupfeka protector inovhara musana. Chinhu chega cheziya iro ziya rinogadzirwa kubva mukushandisa uye kubva kune rimwe zuva richidziya kupfuura rimwe, asi kazhinji rakaoma kana uchichaja wachi. Zvakare uchifunga kuti ndiyo mutambo mutambo, kuti ndiro ziya rinokanganisa kudhindwa kwescreen ingaite kunge jee. NeChipiri, Ndira 2016, ini ndine musangano neane hungwaru zvakare. Izvi hazvisi kuzogadziriswa, nekuti nguva dzafamba uye ndinoona kuti zvinhu zvakangofanana. Tariro yandinayo ndeyekuti garandi ichavandudzwa pavanondipa imwe nyowani kubvira pandakatenga yekutanga muna Chikunguru 19 uye iyo warandi pane kuti ipere muna Chikunguru 2015, pawebhusaiti yeApple kuti ndione kuti garandi yasara sei, Iye inotaura kuti inopera munaGunyana 2016, 30, pandakangowana iyo 2016 Apple Watch. Ngatitarisirei kuti inoenderera seizvi, nekuti haisi mhosva yangu kuti chishandiso chinodonha pachiratidziro chemwedzi mitatu. Haisi dambudziko rekushandisa kana dambudziko rangu, asi chakajeka kugadzira chiremerera. Ichokwadi ndechekuti hachisi chinhu chinoonekwa, asi ini handidi chishandiso chine € 2, inofanirwa kuchipfeka "chakasakara" nekuti havana kuita zvinhu nemazvo. Kuti ivo vanoburitsa wachi nehurema hwakagadziriswa uye nguva
Ndine ruva regoridhe Apple Watch uye chaicho chinhu chakaitika kwazviri. Ini ndaisatarisira izvi kubva pane zvekushandisa zvakagadzirirwa zvemitambo Kana chimwe chinhu chinotyisa sekunge iri kuputika bhatiri reCherechedzo 7, asi inosiya zvakawanda kuti zvidikanwe zvichibva kune yemhando Apple chigadzirwa. Ndinovimba iyo sevhisi sevhisi inogadzira iyo yekugadzira uye dhizaini dhizaini.
Ndakaitora zvakare svondo rapfuura. Ino inguva yechishanu ndichiipfeka. Mune dzimwe nguva, vakaenda nayo kuBreda ndokundipa inofungidzirwa kuti nyowani. Ndiro chete bhokisi, risina tambo kana charger. Zvino zvinofungidzirwa uye maererano nezvavakandiudza netsamba kubva kuGenius Bar, sezvo vakawedzera nyaya yangu nekuitora kakawanda, vakandiudza kuti vari kuzondipa imwe nyowani nebhokisi rayo rekutanga uye nevimbiso nyowani. Ini ndinonzwisisa kuti imwe nyowani ine yekutanga bhokisi uye ine chitsva chitsidzo chakafanana kana iwe uchiitenga, ine tambo dzayo uye charger yayo uye maviri-makore garandi zvakare, nekuti kana zvisiri, zvingave zvakangofanana chaizvo nezvandakaita dzimwe nguva. Ini ndavatovapindura ndichiti izvo chaizvo, asi izvo ndoziva kuti zvicharamba zvichiitika kwandiri uyezve ndicharamba ndichizvitora
Carlos Isaza akadaro
Manheru akanaka, wachi yakaitika kwandiri, uye ndakafonera Apple uye vakandiudza kuti havangaichinje nekuti yaive yekukuvara kwekuzora. Vakakwidziridza nyaya yangu kuinjiniya uye izvo zvavakataura ndezvekuti ndaifanira kuratidza invoice yekutenga chaiyo. Sezvo zvichikwanisika kuti mumwe achachengeta invoice mwedzi gumi mushure mekutenga, rimwe dambudziko rakamuka nderekuti garandi inongovhara kwandakatenga wachi, ndinogara muColombia uye wachi yandakatenga kuUnited States, saka ini tumira wachi yekuchinja kwako uye zvanga zvisingaite.
Pindura Carlos Isaza
GESSLER YADIR JAIMES OCHOA akadaro
ZVAKAITIKA KWANGU KUNE MADHIVHIPI MAVIRI KANA KUTAURA IMWE YAKASHANDURWA ASI IMWE YAYO YAVAKANDIPA KUKOMEDZA KWANGU PAMUSORO PEMAAPLELE KUTI NDAKASANGANA NEKUCHINJA UYE ZVAKAITIKA ZVAKAITIKA KUTI VANODZOKA KANA KUTI VABVISE PAMUSORO SEShamwari YAKO
Pindura kuna GESSLER YADIR JAIMES OCHOA
WhatsApp Webhu, ongororo yakaoma uye mashandisiro eChitChat